सरकार र निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको लगानी सम्मेलन सकारात्मक उपलब्धी बन्ला ? – Mission Khabar
सरकार र निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको लगानी सम्मेलन सकारात्मक उपलब्धी बन्ला ?
मिसन खबर १४ चैत्र २०७५, बिहीबार १०:०८
काठमाडौं– काठमाडौंमा शुक्रबारबाट शुरु हुने लगानी सम्मेलनको तयारी पुरा भएसँग सरकार र निजी क्षेत्रमा उत्साह बढेको छ । अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले पत्रकार सम्मेलन गरेर लगानी सम्मेलनको तयारी पुरा भएको जानकारी दिदैगर्दा यो सम्मेलन विगतको भन्दा उपलब्धीमुलक हुने बताए ।
कत्ति पनि लगानी भित्र्याउन नसकिरहेको लगानी बोर्डले लगानी सम्मेलनलाई उपलब्धीमुलक बनाइहाल्ला भनिहाल्ने अवस्था अझै देखिन्न । विगतको सम्मेलनमा पनि अन्तराष्ट्रि«य वित्तीय संस्थाहरू, लगानीकर्ता, कुटनीतिक नियोग, विकास साझेदार, गैरआवासीय नेपालीको सहभागीता रहेको थियो । तर सम्मेलन लगानी ल्याउन कत्तिपनि सफल भएन यो सम्मेलनको स्वयम बोर्डका अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नेछन् । सम्मेलनका लागि ३२ खर्ब रुपैयाँका ७७ परियोजना तयार पारिएको छ । १२ परियोजनामा समझदारी गर्ने गरी प्रतिवद्धता आइसकेको बताइएको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई पनि उत्साहित बनाएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले भनेजस्तै लगानीको लागि नयाँ वातावरण बनेको र विगतको समस्या कम भएको हो वा विगतकै पुनराबृत्ति हुन्छ । केही समयपछि खुल्नेछ । नेपाल चेम्वर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ पनि लगानी सम्मेलनमा आउने प्रतिनिधि यहाँको धरातल बुझेर आउन थालेकोले नेपाली उद्योग र अर्थतन्त्रमा नयाँ छलाङ मार्नेमा आशावादी छन् । सरकारले ‘नेपाल लगानी सम्मेलन २०१९’ सफल बनाउन र नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त थलो हो भन्ने सन्देश दिन हरसम्भव प्रयास गरेको छ । कृषि, जलविद्युत, उद्योग, पर्यटन, यातायात शहरी पूर्वाधार एवं शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रसम्बन्धी परियोजना प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न नीतिगत व्यवस्था एवं नीतिगत सुधार, सम्भावित परियोजनाबारे विषयगत जानकारसँगको पृष्ठपोषण प्रतिक्रिया, निजी सार्वजनिक साझेदारीको नीतिका बारेमा स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ ।
यता, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले लगानी सम्मेलनको क्रममा नकारात्मक कमेन्ट र सन्देश दिन नहुने बताए जस्तै सकारात्मक उपलब्धी बनोस्, यो सम्मेलन हामी सबैको शुभकामना ।
क्याटेगोरी : अर्थ / रोजगार, विकास / पुर्वाधार, सकारात्मक सोच, समाचार